Afrika Mainty · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Oktobra, 2018
Anjerimanontolo ao Ife
Nizeria 29 Oktobra 2018
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Oktobra 2005) “Sakafo Alahady Atoandro amin'ny Fomban'Ife”, nalain'i Jangbalajugbu-Homeland Stories (rohy maty)
Durbar: Zaria, Nizeria.
Mandritra ny Durbar, manao matso ireo mpitaingina soavaly ary miroso mirongo sabatra sy basy ho fahatsiarovana ny vanimpotoana fahiny izay nampahery ireo Emir rehetra.
Cote d'Ivoire 29 Oktobra 2018
Amerika Avaratra 26 Oktobra 2018
Finday Avo Lenta+Bluetooth: Paradisan'ny Fanoratana Bilaogy Ao Ghana
Ghana 25 Oktobra 2018
Tanatin'ny minitra vitsy dia afaka namoaka rakitsary avy amin'ny alalan'ny finday avo lenta sy Bluetooth izahay. Manontany tena aho raha ity no lahatsary anaty bilaogy voalohany indrindra avaty Ghana nalaina tamin'ny finday avo lenta?
Zimbaboe 24 Oktobra 2018
''Satria miha mahantra lalandava ny mahantra, hiha-manana fotsiny kosa ireo manan-karena ao Zimbaboe. Ao anatin' ity lahatsoratra ity, mamaritra ny fomba nitomboan'ny tsenambolan'i Zimbaboe ho 12 000 % raha oharina amin'ny tamin'ny taona lasa i Mugabe Makaipa satria lasa tafiditra ho anisan'ireo toerana vitsy azo antoka tsy dia fahita firy ary azo iarovana ny vahoaka tsy hiharan'ny fitongonganan'ny sandambola izy.''
Borondi 24 Oktobra 2018
Mediam-bahoaka 23 Oktobra 2018